विश्वासको मतमा मतदान नगरी बागमती प्रदेशसभा स्थगित, के हुन्छ अब ?
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » विश्वासको मतमा मतदान नगरी बागमती प्रदेशसभा स्थगित, के हुन्छ अब ?
हेटौडौं । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको छ । तर प्रस्तावमा छलफल र मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक कात्तिक ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
शाक्यले सदनबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा टेवल भए पनि मत विभाजन प्रक्रिया भने अर्को बैठकमा गरिने भएसँगै उहाँको सत्ता लम्बिएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाक्य उपाध्यक्ष रहेको एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएसँगै शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अल्पमतमा पर्नुभएकी मुख्यमन्त्रीले असोज २५ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि दलहरुको सहमतिमा कात्तिकको पहिलो हप्ता मत विभाजन गर्ने तयारी प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको छ ।
‘दशैंको समय छ । सत्ता पक्षको आग्रहअनुसार दशैंपछि मत विभाजन गर्ने सहमति भएको हो । हामी एक हप्ताभित्रमा विश्वासको मत विभाजन गर्नेछौं’, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले भन्नुभयो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आह्वान गरेको सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठकमा दशैंपछि विश्वासको मत लिने सहमति भएको थियो ।
एमालेको एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य पार्टी विभाजनमा १३ सांसदले नेकपा (एस) रोजेपछि अल्पमतमा पर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभा नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठक सकिएर सभामुख श्रेष्ठले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।